I-Villa Helena Terrace Ikamelo elilodwa & isidlo sasekuseni - I-Airbnb
I-Villa Helena Terrace Ikamelo elilodwa & isidlo sasekuseni
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Geraldine
Kuyo yonke le minyaka, naphezu kokulungiswa okuhlukahlukene, i-Villa Helena yakwazi ukugcina ubuhle bayo nobuqiniso bayo. Izingadi ezinomthunzi neziluhlaza zinikeza indawo ekahle yokuzola nokuthula, phakathi kwedolobha. Endaweni yayo yokudlela, izivakashi zingajabulela ukudla okugqugquzelwe umhlaba wonke futhi ziphumule ngesiphuzo usuku lonke.
Ibhulakufesi elikhulu (ijusi entsha, ikhofi noma itiye, i-croissant, amaqanda, ujamu owenziwe ekhaya) nakho kufakiwe enanini futhi kunikezwa phakathi kuka-8am no-10:30 am.
Igumbi lifanele umuntu ongu-1 onombhede owodwa omkhulu (ububanzi obuyi-120cm) nomsebenzi we-inthanethi. Inedeski kodwa futhi ungasebenza noma uphumule ngaphandle kwethala noma engadini yezindawo ezivamile
Ngizoba lapha izinsuku eziningi amahora ambalwa emini. Umphathi wethu, u-Sudha naye uyatholakala kuze kube ngu-5pm ukuze akusize uhlele usuku lwakho. Ngesikhathi sasebusuku, unogada uzoba khona esizeni uma kunesimo esiphuthumayo